Mberi Tarisiro Yekutarisa - Sorrento Therapeutics
Pamberi Kutsvaga Zvinyorwa
Ruzivo rwunopihwa pawebhusaiti ino runosanganisira ruzivo rwekumberi uye zvirevo zvekumberi (pamwe chete, "zvekutarisa-mberi zvirevo" mukati mezvinoreva mitemo yezvibatiso inoshanda, kusanganisira mukati mezvinoreva "chiteshi chengarava chakachengeteka" zvakapihwa zveUS Private Securities Litigation. Reform Act ye1995) ine chekuita ne Sorrento Therapeutics, Inc. ("Sorrento"). Matauriro anotarisa mberi anoratidza zvinotarisirwa nevatungamiriri veSorrento uye zvavanotenda maererano nezviitiko zvemunguva yemberi uye zvinogona kuratidza zvirongwa zvehutungamiriri hweSorrento, zvinangwa, zvinangwa uye mishoni. Uku kutaura kunomirira mberi hakunei nenhau chaiyo kana kuti yazvino uye kunogona kuperekedzwa namashoko akadai sa“vavariro,” “kufungidzira,” “tenda,” “zvinogona,” “kufungidzira,” “kufungidzira,” “kufanotaura, ” “vavarira,” “zvingadaro,” “ronga,” “zvinobvira,” “zvinobvira,” “kuda” nemamwe mashoko namashoko ane revo yakafanana. Izvi zvirevo zvine chekuita, pakati pezvimwe zvinhu, zvinotarisirwa neSorrento manejimendi maererano nehurongwa, zvinangwa, marongero, kushanda kweramangwana kana kuita kwemari, zvirongwa zvebhizinesi uye tarisiro, uye zvinotarisirwa maererano nemiedzo yekiriniki, nguva yebudiriro, nhaurirano nevakuru vane hutongi, zvirongwa zvebudiriro, vanoda budiriro uye mishonga yekuferefeta iri kuvandudzwa neSorrento uye nevabatsiri veSorrento. Mashoko anotarisa mberi ari pawebhusaiti ino haasi zvivimbiso kana vimbiso, uye haufaniri kuisa chivimbo chisina kufanira pane izvi zvinyorwa zvinotarisa mberi nokuti zvinosanganisira njodzi dzinozivikanwa uye dzisingazivikanwe, kusava nechokwadi uye zvimwe zvinhu, zvakawanda zvacho zvisingagoneki kutungamirirwa naSorrento uye zvinogona ita kuti mibairo chaiyo isiyane kubva kune idzo dzinotaurwa kana kurehwa nezvirevo zvinotarisa mberi izvi. Njodzi dzakadai uye kusava nechokwadi kunosanganisira, asi hazvigumiri, kukanganisa kwemamiriro ehupfumi, mamiriro ehupfumi muindasitiri yebiopharmaceutical, shanduko yemamiriro ekutonga, kushata kwemusika wemasheya, kushanduka kwemitengo, kugona kwedu kusimudzira nekuchengetedza pfuma yedu yehungwaru uye. shandisa bhizinesi redu pasina kutyora kodzero dzepfuma yevamwe, kuvimba nevechitatu mapato uye / kana zvibvumirano zvekubatana zvebudiriro uye kutengeserana kwezvigadzirwa zvedu, shanduko yemamiriro emakwikwi, shanduko muchiyero chekutarisira kune akasiyana zviratidzo umo Sorrento. inobatanidzwa, uye dzimwe njodzi dzakatsanangurwa mushumo wepagore weSorrento paFomu 10-K, pamwe nemamwe mafaera anozoitwa nguva nenguva neUS Securities and Exchange Commission, anowanikwa pa www.nes.gov. Njodzi idzi uye kusavimbika zvinogona kuita kuti mhedzisiro yeramangwana, kuita kana kubudirira zvisiyane kubva pamibairo, kuita kana kubudirira kunoratidzwa kana kurehwa nezvirevo zvekutarisira mberi zvakadaro. Mhedzisiro yakadai, kuita kana kubudirira zvinosanganisira, asi hazvina kugumira, nguva yekunyoresa kana kupedzwa kwemiedzo yekiriniki, mhedzisiro yekuedzwa kwekiriniki, nguva nemhedzisiro yezvirongwa zvekutonga, budiriro inoenderana kana kushaikwa kwebudiriro mukuvandudza nekuwana. kubvumidzwa kwemutemo kwevanokwikwidza chigadzirwa cheSorrento, kubudirira, kushanda kana kuchengetedzeka kwechero wevanoda chigadzirwa cheSorrento, kugona kukwira, kugadzira nekugadzira akakwana maitirwo ekugadzira, kiriniki kana kushambadzira huwandu hwevanoda chigadzirwa cheSorrento, uye kubudirira kana kushomeka. yekubudirira mumusika kugamuchirwa kwechero ipi yevamiriri vezvigadzirwa zveSorrento. Kuvandudza zvinodhaka uye kutengeserana kunosanganisira huwandu hwengozi, uye nhamba shoma chete yekutsvakurudza uye zvirongwa zvekusimudzira zvinoguma nekutengeserana kwechigadzirwa. Mhedzisiro munhanho yekutanga miedzo yekiriniki inogona kusaratidza mhedzisiro izere kana mhedzisiro kubva padanho rekupedzisira kana chiyero chekiriniki miedzo yekiriniki uye haina chokwadi chekubvumidzwa nemutemo.
Pawebhusaiti ino, manejimendi eSorrento anogona kureva mibairo, fungidziro kana matanho ekuita asina kugadzirira zvinoenderana neUS Generally Accepted Accounting Principles (“GAAP”) sekutaurwa kwazvinoitwa mumafaira ekambani eSEC. Izvi mhedzisiro, fungidziro kana matanho ekuita asiri eGAAP matanho uye haana kuitirwa kutsiva kana kutsiva mhedzisiro yakayerwa pasi peGAAP uye anowedzera kune GAAP yakashumwa mhedzisiro.
Izvi zvirevo zvinotarisa kumberi zvinongotaura sezvezuva ravakatanga kuitwa kana kuvandudzwa pawebhusaiti ino, uye Sorrento apa inorambira chero chinangwa, basa, chisungo kana kuita kudzokorora kana kugadzirisa zvirevo zvinotarisisa zviri pawebhusaiti ino.